विचित्रको तालः न पानी घट्छ, न बढ्छ, दैनिक रङ फेरिन्छ ! - Everest Dainik - News from Nepal
रनि विवश, महेन्द्रनगर । महाभारत पर्वत श्रृंखलाको कान्छो पहाडको मध्य भाग । चारैतिर घना जङ्गल । विचमा सफा सुन्दर र शान्त ताल, स्निग्ध वातावरण । चार तिर देवीदेवताका थान । तालको पानी कति कञ्चन भने, न त्यहाँ रुखका पात खसेका छन्, न पानीको कुनै निकास नै भेटिन्छ ।
अलौकिक सौन्दर्य नियालेर हेर्ने हो भने पानीका फोकाहरु हल्का गरी झिल्का जस्तो देखिने ।भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ९ चुरे पहाडमा झिलमिला ताल आफ्नो अलौलिक दृष्य देखाएर वर्षौैदेखि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । झिलमिला ताल स्वदेशी र विदेशी सबैको रोजाईमा परेको छ ।
‘अप्ठेरो समस्यामा परेका मान्छेहरु आफ्नो मनोकामना लिएर आउँछन्, माता झिलमिलाको दर्शन गरेपछि त्यो मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ’ समाजसेवी लाल बहादुर विष्टले भने । उनी झिलमिला संरक्षण विकास समितिका उपाध्यक्ष हुन् । दुई वर्ष अघि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका वासिन्दाले संयुक्त रुपमा ताल संरक्षणका लागि भीनपा वडा नं. ९ का मोति सिह महताको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका हुन् । समितिका उपाध्यक्ष विष्ट परशुराम नगरपालिका–७ नउलाका वासिन्दा हुन् ।
‘म सानैदेखि यो ताल देखेको छु, न त यसको पानी कतै निकास हुन्छ, न त कम हुन्छ, बर्खामा अलि मात्रै बढ्छ’ समाजसेवी विष्टले भने,‘यो तालमा के शक्ति छ, कस्तो छ, आजसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन ।’ विहान, दिउँसो र साँझ तीन पटक पानीको रङ्ग फेरिने गर्छ । विहान सुनहरा, दिउँसो निलो र साँझ हरियो आकारमा ताललाई देख्न सकिन्छ । दैनिक रङ्ग फेरिने भएकाले यसको नाम झिलमिला राखिएको हो । ‘यसरी दिनदिनै रङ्ग फेरिएर भिलमिल हुने भएकाले यसको नाम झिलमिला रहन गएको हो’ उपाध्यक्ष विष्टले भने ।
अक्षता खान हुल बाँधेर आउने माछा सर्पसित डराएको जस्तो देखिदैन । वर्षौदेखि समान आकारमा देखिदैं आएका माछा दर्शनार्थीका नजरमा ठ्याक्कै पर्ने गर्छन् । तालको दैवीय शक्तिका कारण माछा मारेर खाने गरिएको छैन । तत्कालिन नेकपा(माओवादी) को सशस्त्र जनयुद्धमा तालका माछा मारेर आएका माओवादी कार्यकर्ता सैनिक कारवाहीमा मारिएको स्थानीय बताउँछन् ।
तालमा माछा मारेर खाएका चार जना परशुराम नगरपालिकाको नउलाको छिमेकी गाउँ भुईतालमा सैनिक कारवाहीमा मारिएका थिए । ‘अरु कसैले खाएका थिएन, माछा खाएका दिन उनीहरु सैनिक कारवाहीमा मारिए, त्यो दैवीय शक्तिले त होला, त्यहीं दिन सेना पुग्यो, भिडन्तमा मृत्यु भयो’ समाजसेवी विष्टले सम्झिन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस झलारीमा शुक्लाफाँटा क्षेत्रीय पर्यटन तथा औद्योगिक मेला हुने
पूर्णागिरी मेला अर्थात चैते दशैँमा भारतका विभिन्न सहरबाट दर्शनार्थीहरु आएर ताल छेउको पूर्णागिरी माताको दर्शन गर्दैै आएका छन् । दर्शनार्थीले मन्दिरमा चढाएका त्रिशुल र रङ्गिन वस्नले तालको शोभा बढेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको मटेनाबाट चुरेको जङ्गल हुँदै दुई घण्टामा तालसम्म पुग्न सकिन्छ । मटेनाबाट गहुँताणाी मन्दिर हुँदै ताराकोट भएर झिलमिला पुग्ने गरिएको छ । ब्रह्मदेब र कालिताल झरना बाटो भएर ताराकोट हुँदै तालसम्म पुग्ने बाटा छन् ।
‘तालको संरक्षण र प्रचारप्रसार गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने सोचाईका साथ योजना अघि बढाएका छौ’ उनले भने,‘यसका लागि संघ र प्रदेश सरकार पनि पहल गरिरहेका छौ ।’ ताल नजिक पूजापाठ र बस्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् । धुनीघर, पूजारी घर धर्मशाला बनाइएको छ । धर्मलाशा दुई ओटा छन् । एउटा धर्मशालामा दर्शनार्थी पर्यटकलाई खाना पकाउनका लागि भाँडाकुँडा राखिएका छन् ।
अहिले पूजारी बस्ने घरमा यस अघि महात्मा बस्ने गर्थे । उनको निधनपछि पूजारी बस्दै आएका छन् । झिलमिलामा तालको प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माणका कार्य गरिएका छन् । ताल वपिरि चक्रपथ निर्माण र ताल छेउमा बस्नका लागि बेञ्च राखिएका छन् । ती बेञ्च प्रयोग विहीन छन् । केही बेञ्च घाँस मुनि छोपिएका छन् । पूर्वी किनारको बेञ्च भने बस्न सकिने अवस्थामा छ ।
। ती बेञ्च प्रयोग विहीन छन् । केही बेञ्च घाँस मुनि छोपिएका छन् । पूर्वी किनारको बेञ्च भने बस्न सकिने अवस्थामा छ ।
‘तालको प्रचारप्रसारका लागि शिवपुराण लगायौ, शौचालय निर्माण, सोलार जडान लगायतका पूर्वाधार बनाएका छौ’ झिलमिला संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष लाल सिह विष्टले भने ।
तल उत्तर र पूर्वी किनारबाट बर्खामा आउने माटोले पुरिने गरेको छ । ताल पुरिन नदिन माटो रोकथामका लागि कार्यक्रम गरिनु पर्ने उपाध्यक्ष विष्टले बताए । ‘नत्र ताल पुरिन सक्छ, यसका लागि समयमै सचेत हुन आवश्यक छ’ उनले भने । झिलमिलालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास गरिएका छन् ।
तत्कालिन जिल्ला समन्वय समितिका सभापति ऋषिराज लुम्सालीले सडक खनेका थिए । जिविसको विश्व खाद्य कार्यक्रम खनिएको सडकमा केही समय गाडी गुडेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सवारी सञ्चालन रोकिएको थियो । धुमपान निषेधका अभियन्ता हेल्प मदन चन्दको हेल्प नेपाल, कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघ, राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्र लगायतले तालको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सहयोग गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ९ मटेना, ब्रह्मदेब र भीनपा १० तिल्केनीबाट झिलमिला ताल पुग्न सकिन्छ । चुरे फेदमा दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि ताल छेउमा पुग्ने गरिन्छ । यी तीनै ठाउँका बाटो ताराकोटमा जोडिन्छन् । भीमदत्त नगरपालिको भ्यू टावर प्रस्तावित ताराकोट यस अघि स्थानीय गोठ थिए । चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएपछि ती गोठ हटाइएका थिए । ताराकोटबाट माथि झिलमिला हिँडेपछि माछा मासु खान नपाइने भएकाले ताराकोटलाई पिकनिक स्पट बनाउने भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको योजना छ ।
ट्याग्स: Jhilmila lake, kanchanpur